Excel ဖိုင်တွေအစား HR Software ကိုအသုံးပြုပြီး လစာစာရင်းတွေကို အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာ လုပ်ဆောင်လိုက်ပါ။ - JustLogin
လစာစာရင်းဆိုတာကတော့ ဘယ်လုပ်ငန်းအတွက်မဆို အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဝင်ငွေထွက်ငွေဆိုတာ လုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့ အရေးကြီးဆုံး ကဏ္ဍတစ်ခုလို့ပြောနိုင်ပေမယ့် ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်ပဲ ဒီလို ဖြစ်လာနိုင်ရတာာပါ။ ဒါ့အပြင် အရည်အချင်းရှိတဲ့သူကို လုပ်ငန်းထဲ ခေါ်ယူဖို့ ထိုက်သင့်တဲ့ မက်လုံးပေးတာမျိုးတွေ၊ လုပ်ခလစာကို အချိန်မှီပေးနိုင်ခြင်းတွေ ကလည်း ယုံကြည်မှုကို ရရှိလာစေနိုင်တဲ့ အဓိကအချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ခလစာစီမံခန့်ခွဲမှု အားနည်းမှုတွေ ကြောင့် လုပ်ခလစာကို အချိန်မှီမပေးနိုင်တဲ့အချိန်မျိုးမှာ အရည်အချင်းရှိတဲ့ ဝန်ထမ်း တွေကို ဆွဲခေါ် ထားနိုင်ဖို့ ဆိုတာ ဘယ်လိုကုမ္ပဏီမျိုးအတွက်မဆို တော်တော်လေး အခက်တွေ့စေနိုင်ပါတယ်။ အရှင်းဆုံး ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ဒါက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်း အတွက် လုံးဝကို အရေးကြီးတဲ့ အချက်တစ်ခု ဖြစ်နေပါတယ်။
လုပ်ခလစာဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက် Excel ဖိုင်တွေကို အားထားခြင်း
တစ်ချို့လုပ်ငန်းတွေမှာ လုပ်ခလစာစာရင်းတွေကို Excel ဖိုင်နဲ့ ဆောင်ရွက်တာက ထူးဆန်းတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကလည်း သိသာပါတယ်။ Excel က စာရင်းအင်းအချက်အလက်တွေအတွက် အသုံးများတဲ့ tool တစ်ခုဖြစ်နေပြီးတော့ သေသေချာချာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့လည်း တွက်ချက်နိုင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြင်နေတွေ့နေရသလို အကုန်လုံးက ရိုးရှင်း နေတာမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
လစာတွက်ချက်ရသလိုမျိုး ကိန်းဂဏန်းကြီးတွေ၊ ငွေပမာဏအများကြီးတွေနဲ့ တွက်ချက်ရတော့မယ် ဆိုရင်တော့ Excel ဖိုင်တွေက ထင်ထားသလိုမျိုးတော့ အဆင်ပြေလွယ်ကူစေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မိတ်ဆွေရဲ့ လုပ်ငန်းက တစ်စတစ်စကြီးလာတဲ့အခါ ဝန်ထမ်းတွေကလည်း များလာတဲ့အတွက် Excel နဲ့ လစာစာရင်းတွက်ချက်ရတာက ပိုပြီးတော့ ရှုပ်ထွေးလာစေနိုင်တဲ့ အပြင် မတော်တဆ အမှားပါသွားနိုင်ချေ ကလည်း အတော်လေးများပါတယ်။ လစာနှုန်းထားမတူတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ အများကြီးပါတဲ့ အတွက်ကြောင့် ကိန်းဂဏန်းတွေအားလုံးကို တွက်ချက်ဖို့ဆိုတာက လွယ်ကူတဲ့ အရာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ Excel ဖိုင်က ရိုးရိုးပုံစံလေးတစ်ခု မှားသွားရင်တောင်မှ တစ်ပတ်လောက် အထိ အချိန်ယူဖြေရှင်းရနိုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် HR နဲ့ Management Information System report တွေအတွက် တင်ပေးရမယ့် အချက်အလက်တွေ ပါနေရင် ပြန်ပြီး အစားထိုးပြင်ရတာက တစ်ကယ့်ကို အခက်တွေ့စေမှာပါ။ ပြန်ပြင်ရမယ့် လုပ်ငန်းအစအဆုံးက အချိန်လည်း တော်တော် ပေးရနိုင်တဲ့အပြင် အမှားမခံတဲ့ လစာစာရင်းတွေအတွက် လုံခြုံရေးတွေကလည်း အားနည်းလွန်းပါတယ်။
Excel ဖိုင်တွေဆိုတာက ရှုပ်ထွေးပြီးခက်ခဲ နက်နဲတဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေကို မှတ်သားပြီး တွက်ချက် နိုင်ပေမယ့် လုပ်ခလစာ စာရင်းလိုမျိုး လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ပြည့်ပြည့်ဝဝ လုပ်နိုင်ဖို့ ကတော့ ကန့်သတ်ချက်တွေ ရှိနေပါတယ်။ ဒါဆိုရင် တက်သစ်စ လုပ်ငန်းတွေ၊ အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း တွေကနေ လုပ်ငန်းကြီးတွေအထိ သူတို့ရဲ့ လစာစာရင်းတွေကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းကြသလဲ? အသုံးဝင်လှတဲ့ Cloud-based လစာစာရင်း စီမံခန့်ခွဲပေးတဲ့ Software တွေကို အသုံးပြုကြပါတယ်။
လစာစာရင်းစီမံခန့်ခွဲပေးသော Software တစ်ခုရှိခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ
(၁) အချက်အလက်များကို တစ်နေရာတည်းတွင် စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခြင်း
Cloud-based လစာစီမံခန့်ခွဲပေးတဲ့ Software တွေဘာကြောင့် သုံးကြတာလဲ? ပထမဆုံးနဲ့ အရေးအကြီးဆုံး အချက်ကတော့ လုပ်ငန်းတွေရဲ့ လစာစီမံတွက်ချက်မှုမှာပါတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ တစ်ဦးချင်းအချက်အလက်အသေးစိတ်တွေ၊ လစာပြန်စစ်ထားတဲ့ မှတ်တမ်းတွေနဲ့ အခြားအချက်အလက်တွေ အများကြီးကို တစ်နေရာတည်းကနေ ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ စီမံပေးနိုင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ Excel ဖိုင်တွေမှာ မလုပ်နိုင်တဲ့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ မှတ်တမ်းပြင်ဆင်တာ စီစစ်တာတွေကိုလည်း အချိန်တိုအတွင်း ပြင်ဆင်နိုင်ပါသေးတယ်။ အရေးကြီးတဲ့အချက်အလက်တွေ ပါဝင်တဲ့အတွက် လုံခြုံမှုရှိဖို့ကလည်း လိုအပ်ပါတယ်။ လစာစီမံ ခန့်ခွဲပေးတဲ့ Software ကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဘယ်သူမှဝင်မကြည့်နိုင်သလို ဝင်ကြည့်နိုင်တဲ့သူတွေကိုလည်း အဆင့်အမျိုးမျိုးခွဲပြီး သတ်မှတ်ထားနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒီလိုလုပ်နိုင်တာက အဖွဲ့လိုက်လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ပိုကောင်းစေပြီးတော့ ပိုလည်း တိုးတက်လာစေပါတယ်။
(၂) Accounting Software များနှင့်လည်း ပေါင်းစပ်နိုင်ခြင်း
လစာစီမံခန့်ခွဲပေးတဲ့ Software တွေဟာ လစာတွေကို အကောင့်တွေဆီ Error မရှိဘဲ လွှဲပြောင်းပေးနိုင်တဲ့ QuickBooks Online နဲ့ Xero တို့လို Accounting System တွေနဲ့လည်း ပေါင်းစပ်ပြီး အလုပ်လုပ်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး လုပ်ခလစာပေးဆောင်တဲ့ စနစ်မျိုးနဲ့ဆိုရင် လစာတွက်ချက်ဖို့အတွက် ရုံးပျက်ရက်တွေ အချိန်ပိုဆင်းတာတွေ စတဲ့အချက်အလက်တွေကို Accounting System ထဲ အလိုအလျောက် ပို့ဆောင်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၃) Software ဖြင့် လူအစားထိုးပြုလုပ်နိုင်ခြင်း
လစာတွက်ချက်မှုတွေမှာ ရှုပ်ထွေးတဲ့တွက်ချက်မှုတွေ လုပ်ဆောင်ချက်တွေပါဝင်နေပြီးတော့ လစဉ်လတိုင်း ဒီလိုပဲ ပြုလုပ်နေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလိုအရေးကြီးတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာလုပ်နိုင်ဖို့ လူစားထိုးနိုင်တဲ့အပြင် အချိန်ကုန်လည်း သက်သာစေတဲ့အတွက် အသုံးပြုရကျိုးနပ်မှာတော့ သေချာပါတယ်။ နောက်ထပ်ရှုပ်ထွေးတဲ့ တွက်ချက်မှု တစ်ခု ဆိုရင်တော့ Tax တွေတွက်ချက်ရတာပါပဲ။
Tax တွေတွက်ချက်တဲ့အခါ ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် ကွာဟချက်တွေက မိတ်ဆွေရဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကို ဒုက္ခရောက်သွားစေနိုင်ပြီးတော့ အမှားနည်းနည်းလေးမှမခံတဲ့ တွက်ချက်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခြားလုပ်ငန်းတွေက သူတို့ရဲ့ Tax တွေလစာတွက်ချက်တာတွေကို လူကိုယ်တိုင် အားစိုက်လုပ်နေရတဲ့အချိန်မှာ မိတ်ဆွေအနေနဲ့ အားစိုက်စရာမလိုဘဲ လစာစာရင်းစီမံပေးတဲ့ Software တွေကို အသုံးပြုပြီး အရေးကြီးတဲ့အချက်အလက်တွေကို စီစစ်တွက်ချက်နိုင်တဲ့အပြင် လုပ်ငန်းပိုမိုကြီးထွားလာနိုင်ဖို့ကိုလည်း တစ်ဖက် တစ်လမ်းက ပိုပြီးအာရုံစိုက်ထားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၄) ကွာဟချက်များကိုလွယ်ကူစွာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း
ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ လုပ်ခလစာအတွက် သူတို့ရဲ့ ရုံးပျက်ရက်နဲ့ ရုံးတက်ရက်တွေကို မှတ်သားပြီး တွက်ချက်ရတာက အဓိကအကျဆုံး အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ Excel ဖိုင်ထဲကို လူကိုယ်တိုင်အချက်အလက်တွေ ထည့်သွင်းရတဲ့အတွက် အချက်အလက် ကျန်တာတွေ ဖြစ်နိုင်ချေ ပိုများပြီးတော့ သေချာတိတိကျကျ ပြန်စီစစ်ဖို့ လိုအပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုကိစ္စရပ်တွေက လုပ်ခလစာစီစစ်ပေးတဲ့ Software တွေနဲ့ဆိုရင်တော့ လွယ်လွယ်ကူကူစီမံနိုင်ပြီး အချက်အလက် ကွာဟတာ တွေကိုလည်း လျှော့ချပေးနိုင်မှာပါ။ ရုံးတက်ရက် ရုံးပျက်ရက်မှတ် စီစစ်တဲ့စနစ်ကိုသာ Software နဲ့ပေါင်းထည့်ထားလိုက်တာနဲ့ HR နဲ့ လစာစာရင်းစီမံတဲ့ ဌာတွေအတွက် အချက်အလက်တွေကိုစီမံရတာ ပိုလွယ်ကူသွားမှာြဖစ်ပြီးတော့ လစာပေးတာတွေ အချက်အလက် စစ်ဆေးတာတွေအတွက် သေသေချာချာ အာရုံစိုက်နိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Uncategorized @my မေ 23, 2020
လိုက်လျောညီထွေစွာ အလုပ်လုပ်ခြင်း (Flexible Working) ရဲ့ အနှစ်သာရများ
နေရာရွေ့ပြောင်း လုပ်ဆောင်နိုင်မှုများအတွက် ပိုမိုထိရောက်စေမယ့် HR အက်ပ်လီကေးရှင်း
Uncategorized @my ဧပြီ 5, 2020
Automating HR ဆိုတာ Luxury အတွက်လား ဒါမှမဟုတ် ရှိကိုရှိထားသင့်တာလား?